Malaysia Fights Smog
သံဃာအတုတွေကိုသာ လိုသလို အသုံးချနိုင်ရင် အချိန်မရွေး တိုင်းပြည်ကို စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ ထိန်းထားလို့ ရနိုင်တယ်
ဘာသာ သာသနာနဲ့ လူမျိုးကို စောင့်ရှောက်ဖို့က လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာထက် ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုသူများဟာ အဝေးမှုန်တွေဖြစ်ပါတယ်
The Dead Crow by A Samad Said
Blunders by PM's aide
The Face of Buddhist terror: Wira Thu bin Laden
The Beautiful, Romantic Supermoon..^_^
Religious Teacher 'Indecently' Assaults 13-Year-Old Girl
(Belgium) Muslim Cop Refuses to Greet Women
al-Qaeda Recruits Jihadi in Canadian Mosque
'Moderate Indonesia': Cops Side with Sunni Mob
Teen Actress Burned with Acid for Not Marrying Producer
Boko Haram Attacks Kill Dreams of High Math Achievers
Posted: 23 Jun 2013 09:51 AM PDT
Posted: 23 Jun 2013 08:25 AM PDT
Posted: 23 Jun 2013 10:29 AM PDT
"Apapun tindakan boleh kita buat, tapi kita pastikan ikut jalur yang aman, lakukan perubahan cara aman," katanya depan puluhan ribu rakyat yang hadir.
"Kamu tidak layak (memimpin SPR). Kamu bicara dengan sombong. Orang ini sepatutnya didakwa di mahkamah," katanya dipetik harakahdaily.
"Kamu dah hilang mandat. Kamu tak sanggup ambil tindakan kepada mereka sebab mereka berjasa kepada Umno," katanya.
"Saya beri penjelasan bahawa penipuan paling besar berlaku pada PRU13 lalu (dengan) kecurangan SPR mempertahankan penguasa Umno BN," katanya.
စစ်အာဏာရှင်တွေ သိလိုက်ရတာက ဒီ သံဃာအတုတွေကိုသာ
လိုသလို အသုံးချနိုင်ရင် အချိန်မရွေး တိုင်းပြည်ကို စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ
ထိန်းထားလို့ ရနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ အဓိကအချက်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီး ပေါ်ပေါက်လာတော့ ပြည်သူ့ သံဃာတော်ထုရဲ့ အင်အားကို ချိန်ဆမိပြီး အဲဒီအင်အားကို
ချိန်ခွှင်လျှာညှိဖို့စစ်အာဏာရှင်တွေက အလိုတော်ရိ သံဃာအတုအင်အား
မြှင့်တင်ရေး မြေအောက်စီမံကိန်းကြီးကို စတင်ပြီး လုပ်ဆောင်လာခဲ့ရ
၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးလုပ်ပြီး လမ်းပေါ်ထွက် မေတ္တာပို့ ခဲ့တဲ့
သံဃာတော်တွေကို သေနတ်နဲ့ ပစ်၊ ရေကားနဲ့ ကြိတ်၊ ခေါင်းရိုက်ခွဲ၊
စစ်ဖိနပ်နဲ့ ဆောင့်ကန်ပြီး ဗုဒ္ဒဘာသာရဟန်းတွေကို စော်ကားနေတဲ့အချိန်မှာ
အပယ်လားရင် လားရပါစေတော့၊ သာသနာတော်ကို ကာကွယ်သွားပါ့မယ်
ဆိုတဲ့ ၉၆၉ ဂန္ဓ၀ါစက သံဃာကွန်ယက်က ဘယ်ရောက်နေသလဲ။
၉၆၉ ဂိုဏ်းက ၁၉၉၈ ကတည်းက ပေါ်နေတာ။ သာသနာကို ကာကွယ်မယ့်
သံဃာတွေဆို။ သံဃာ့ညီနောင်တွေ၊ ဘုရားသားတော်တွေ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်
စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ အလူးအလဲ ခံနေရချိန်မှာ သာသနာကိုကာကွယ်မယ့်
၉၆၉ တွေ ဘယ်ရောက်နေသလဲ။
၉၆၉ ဟာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ
ညွှန်ကြားရေးမှူးလုပ်ခဲ့တဲ့ ဦးကျော်လွင် (ခေါ်) နှစ်ဖက်ချွန်ကျော်လွင် ဆိုသူက
စတင် တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ လေဘယ် အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
သီရိလကာင်္နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဘီဘီအက်စ် (ခေါ်) ဗုဒ္ဓူဘာလာစီးနား အကြမ်းဖက်
အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းကြီးမှ ပုံတူကူးချပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေး
လှည့်ကွက်တွေမှာ အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ဖွဲ့ စည်းခဲ့တဲ့ မြေအောက်ဂိုဏ်းတစ်ခုသာ
("၉၆၉ နဲ့ဓမ္မန္တရာယ်" ဗီဒီယိုကလစ်တွင် ပြောကြားချက်များမှ ထုတ်နုတ်ကူးယူ
မူရင်း FB ဗီဒီယိုဖိုင် ကြည့်ရှုရန်..http://www.facebook.com/photo.php?v=389841601127583&set=vb.100003052399093&type=2&theater
မျိုးစောင့်ဥပဒေ ဆိုတာကို စပြီးကြားရစဉ်က အခုဖတ်ရတဲ့အတိုင်း တကယ်ရေးဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေကြမ်းတခုလို့ ကျွန်မ မထင်ခဲ့မိဘူး။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကြာကြာမ၀င်ဖြစ်ဘဲ အကုန် လိုက်မဖတ်ဖြစ်ခဲ့တော့ ဆရာတော် ဦးဝီရသူရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ၊ ဟောပြောမှုတွေကို မကြိုက်လို့ ဆန့်ကျင်သူတချို့က တမင်အရွဲ့တိုက် ဟာသလုပ်ပြီး တင်ထားတယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ အမှန်ပါ။ နောက်တော့ အွန်လိုင်းပေါ် တခါဝင်လာတိုင်း ဒီအကြောင်းကိုပဲ လူတွေက ပြောနေတင်နေကြတာ တွေ့ရတော့မှ ဒါတကယ်ရေးထားတာပဲ ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ သိရပေမယ့်လည်း ဘာတွေရေးထားတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်တိုင်မဖတ်ရခင်ထိ တိတိကျကျ မသိရသေးဘဲနဲ့ ကျွန်မဘာမှ ၀င်မပြောဖြစ်ဘူး။ ဒီနေ့တော့ ကိုကိုးအိမ်ရဲ့ စာမျက်နှာမှာ တင်ထားတဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေကို ပေးထားတဲ့လိပ်စာအတိုင်း ဒေါင်းလုပ်ပြီး ကိုယ်တိုင် ဖတ်လိုက်ရပြီးမှ မပြောချင်မရေးချင်ပေမဲ့ ပြောသင့်ရေးသင့်တယ်ထင်လို့ အခု ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာပါတယ်။
စာမျက်နှာ ၂၇ မျက်နှာရှိတဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေကို ဖတ်ကြည့်တော့ ဒီဥပဒေကို ရေးသားတင်ပြရတဲ့အကြောင်းအရင်းနဲ့ အကိုးအကားတွေက ပိုများတာကို တွေ့ရပြီး ဖတ်ချင်နေတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရာ မိန်းအိုင်ဒီယာကို နောက်ဆုံးမျက်နှာရောက်မှ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီဥပဒေကြမ်းက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံထဲက အချက်တွေကို ကိုးကားပြောဆိုထားတဲ့ တချို့နေရာတွေမှာ ဖတ်ရတာ ငြီးငွေ့သလို ဖြစ်ပေမဲ့ နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ မရောက်ခင်အထိ အထူးသဖြင့် ရေးသားသူတွေက ဒီဥပဒေ ဖြစ်လာအောင် သူတို့ကို စေ့ဆော်ပေးတဲ့ အကြောင်းရင်းကို တင်ပြတဲ့ သမိုင်းနောက်ခံ အချက်အလက်တွေမှာတော့ ကျွန်မ စိတ်အစဉ်ကို တကယ်ပဲ ဆွဲဆောင်မှုပေးခဲ့ပြီး ဆွဲခေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျန်တဲ့ ဟိန္ဒူ၊ မူစလင်၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေရဲ့ လက်ထပ် ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေသာ ဥပဒေတခုစီအနေနဲ့ တရားဝင် ရှိနေပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း ဥပဒေဆိုတာက ဥပဒေတခုအနေနဲ့ တရားဝင် ပြဌာန်းထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဓလေ့ထုံးတမ်း တခုအနေနဲ့သာ ရှိနေသေးကြောင်းကိုလည်း ဒီဥပဒေကြမ်း ဖတ်ရမှပဲ ကျွန်မသိခဲ့ရတော့ ကျွန်မအတွက် ဗဟုသုတ အသစ်တခု တိုးစေခဲ့တာ အမှန်ပါ။ ဒါကိုဖတ်ရင်း ရေးသားတင်ပြသူတွေရဲ့ အမျိုးဘာသာ သာသနာအပေါ်ထားရှိတဲ့စေတနာနှင့်၊ သာသနာ ရောင်ဝါထွန်းလင်း တောက်ပနေတဲ့ ဒီတိုင်းပြည်ကြီးဟာ တနေ့တချိန်ကျရင် အာဖဂန်နစ္စတန်တို့ အင်ဒိုနီးရှားတို့လို ဘာသာခြားတွေ လွှမ်းမိုးခံသွားရပြီး ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီး အမိမြေမှ ပျောက်ကွယ်ပျက်စီးသွားမှာကို စိုးရိမ်မှုတွေက ကျွန်မကို ရေးသူတွေနဲ့အတူ ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားရစေပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း နောက်ဆုံး အဓိကမိန်းပွိုင့်ကို ရောက်လာတော့မှပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတို့အတွက် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် အဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့လိုက်ရလို့ ကျွန်မကို တကယ်ပဲ အံ့သြသက်စေပြီး ဆွေးနွေးစရာ မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ အစီအရီဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ အားနည်းချက် အားသာချက်ဆိုတာ အနည်းနဲ့ အများကွာတာကလွဲပြီး နေရာတိုင်းမှာ ရှိတတ်ပေမဲ့ ဒီဥပဒေကို ကျွန်မ ဖတ်ရတာ အားသာချက်တချက်မှ မတွေ့ရတော့ စေတနာနဲ့ ရေးဆွဲထားသူတွေကို အပြစ်တင်လိုချင်းမဟုတ်ဘဲ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ထောက်ပြချင်လိုတဲ့စိတ်ကို တားမရဆီးမရ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတချက်ချင်းစီကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ပြီး ဆွေးနွေးပြချင်ပါတယ်။ ပထမအချက် (၁) ဤဥပဒေကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးများ လက်ထပ်ထိန်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ (အရေးပေါ်) ဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။
မျိုးစောင့်ဥပဒေ ဆိုလို့ ဒီလူမျိုးတွေမှီတင်းနေထိုင်ပြီး ဒီလူမျိုးကပဲ အုပ်ချူပ်နေတဲ့ နိုင်ငံမှာ မျိုးစောင့်ဥပဒေဆိုတော့ တမျိုးဖြစ်နေလို့ စကြားတုန်းက သူများ ဟာသလုပ်ထားတယ်လို့ ထင်တယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲဖြစ်တယ်။ ဗြိတိသျှလက်ထက်က နီုင်ငံခြားသားက ကိုလိုနီပြုထားလို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကို ပေါ်လွင်အောင် ပေးထားတဲ့ ဒို့ဗမာအစည်းအရုံးတို့ ဗုဒ္ဓကလျာဏယုဝအသင်းတို့ဆိုတာက နားထောင်လို့ကောင်းသလို သဘာဝလည်းကျပါတယ်။ အခုတော့ လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်းစုံ မှီတင်းနေထိုင်တဲ့ နီုင်ငံမှာ ဘာသာတခုတည်းကို ကိုယ်စားပြုပြီးခေါ်တဲ့ ဥပဒေက မျိုးစောင့်ဥပဒေဆိုတော့ ကျန်တဲ့ဘာသာ ကျန်တဲ့လူမျိုးတွေကို မလေးစားရာရောက်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါကိုထားလိုက်မယ် အဓိကပြောချင်တာက အောက်ကအချက်တွေ ဖြစ်တယ်။
(၂) မည်သူမဆို မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးကို လက်ထပ်မည့်သူသည် တရားဝင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်ရမည်။ စဖတ်လာတုန်းက အကောင်းကြီး၊ ကျွန်မကို စိတ်ကုန်စေတာ အဲဒီအချက်ကနေ စပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အမှန်စင်စစ်က ဘာသာတူမှ လက်ထပ်ရမယ်လို့ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘုရား ဟောတဲ့တရားတွေထဲမှာ မရှိဘူး။ မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က ဗုဒ္ဓဘာသာကို လေးလေးနက်နက် ယုံကြည်ပြီး ဘုရားနဲ့ သံဃာတော်တွေကို အင်မတန်မှ ကြည်ညိုသဒ္ဒါပွားခဲ့တဲ့ ဥတ္တရဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးရဲ့ ခင်ပွန်းဟာ ဘာသာခြားဖြစ်ပေမဲ့ သူဟာ အိမ်ထောင်ကျပြီးလည်း မြတ်စွာဘုရားနဲ့ သံဃာတော်တွေကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုမပျက်ဘဲ တခါတော့ သူက ဥပုဒ်သီလ ဆောက်တည်နေစဉ် ကာလမှာ ဘာသာခြား ခင်ပွန်းကို ပြည့်တန်ဆာမ သီရိမာနဲ့ ခဏထားပြီး သူကိုယ်တိုင်ကတော့ မြတ်စွာဘုရားနဲ့ သံဃာတော်တွေကို ဘာသာခြားနဲ့အတူ နေတဲ့ အိမ်မှာပဲ ဆွမ်းပင့်ဖိတ် ကပ်လှူခဲ့တဲ့ သာဓက တခုရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘုရားလက်ထက်က နာမည်ကျော်ကြား လူသိများလှတဲ့ ကျောင်းအမကြီး ၀ိသာခါဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း သိမှာဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ ခင်ပွန်းလည်း ဘာသာခြားလ်ို့ သိရပါတယ်။ ဒီတော့ ဘုရားလက်ထက်က ၀ိသာခါတို့ ဥတ္တရတို့ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အိမ်ထောင်ရေးမှာ ဘာသာမတူလို့ နစ်နာစရာမရှိ ဘာသာတူဖို့ထက် မိမိကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ ဘာသာကို မိမိလေးလေးနက်နက် ယုံကြည်ဖို့က ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ မြတ်စွာဘုရားဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးကို ယူတဲ့အမျိုးသားဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရမယ်လို့ မဟောခဲ့ဘူးဆိုတာ သက်သေဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားတောင်မှ အမျိုးသမီးအမျိုးသား မခွဲခြားဘဲ လွတ်လပ်စွာ ထိမ်းမြားလက်ထပ် ရွေးချယ်ခွင့်အပေါ် ဘာမှ စောဒက မတက်မှတော့ အခုဒီဥပဒေကြမ်းကို ရေးဆွဲတဲ့ဘုရားရဲ့ သာဝကတွေနဲ့ ထောက်ခံတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ဘုရားလမ်းစဉ်ကို မလိုက်နာနိုင်၊ ဘယ်သူ့အတွက်မှ အကျိုးမရှိဘဲ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ကန့်သတ်တာဟာ အဓိပ္ပာယ်မရှိ ဖြစ်စေပါတယ်။ တခြားဘာသာတွေဖြစ်တဲ့ ခရစ်ယာန်တို့ မူစလင်တို့မှာ သက်ဆိုင်ရာဘုရားတွေက ဘာသာတူမှ ယူရမယ်လို့ ဟောထားလို့ သူတို့ရဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းမှာ ဒီလိုကန့်သတ်ထားပါတယ်။ ပြဌာန်းတဲ့ နေရာမှာလည်း အမျိုးသမီးမှ မဟုတ် သူတို့ဘာသာထဲက အမျိုးသားကိုပဲယူယူ အမျိုးသမီးကိုပဲ ယူယူ လက်ထပ်မည့်သူဟာ ဘာသာတူရမယ်လို့ ပြောတယ်။ အခု ဒီဥပဒေမှာ အမျိုးသမီးကိုမှ ရွေးချယ်ပြီး ကန့်သတ်တယ်ဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို တခြားဘာသာတွေထက် ပိုပြီးအဆင့်နှိမ့်အောင် ချိုးနှိမ်ရာရောက်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ သူများဘာသာမှာ ဘုရားကန့်သတ်လို့ လူတွေက လိုက်နာရတာကို ဘုရားက ဘာမှမကန့်သတ်ထားဘဲ လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် လူ့အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာက သူများဘာသာတွေမှာလည်း ဒီလိုပဲ ပြဌာန်းထားလို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကလည်း ဒါကို အားကျမခံ လိုက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ကိုယ်ပိုင် ရပ်တည်ချက်မရှိ ဘုရားဟောနဲ့လည်းမညီ မိမိဘာသာနဲ့ သဘောသဘာဝချင်းလည်း လုံးဝမတူတဲ့ ဘာသာခြားတွေရဲ့ ပြုမူကျင့်ကြံ လုပ်ဆောင်ပုံတွေကို ပုံတူခိုးချတဲ့ သူများနောက်လိုက်တွေပဲ ဖြစ်သွားမယ် မဟုတ်ဘူးလား။
(၃) ဘာသာခြား ဖြစ်ခဲ့သူက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာအမျိုးသမီးကို လက်ထပ်ထိမ်းမြားမည် ဆိုပါက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ကြောင်း တရားဝင် လက်မှတ် ရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည်။
ဒီနေရာမှာ စောဒက တက်စရာက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တယောက် ဖြစ်အောင် ကိန်းကြီးခမ်းကြီး လုပ်ပြီးခက်ခက်ခဲခဲ လုပ်ရတာမဟုတ် ရတနာသုံးပါးကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရာအဖြစ် လက်ခံပြီး ငါးပါးသီလကို ခံယူလိုက်တာနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်သွားပြီ။ ဒီလောက်လွယ်တော့ ဘာသာခြား (သို့) ဘာသာမဲ့တယောက်က တကယ်ယုံကြည်တာ မဟုတ်ဘဲ သူ့ချစ်သူနဲ့ နီးစပ်ချင်ယုံသက်သက်နဲ့ ကျွန်တော် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဖြစ်ပြီဆိုပြီး ဟန်ဆောင်လို့ကော မရနိုင်ဘူးလား။ ခရစ်ယာန်မလေးနဲ့ လက်ထပ်သွားတဲ့ ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းတဲ့ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတယောက်ဆိုရင် အဖွဲ့အစည်းမှာ လက်မထပ်ခင် ဘုရားကျောင်းမှာ အရင် လက်ထပ်တယ်ဆိုတာ သိရလို့ ဒါဆို နင်သူတို့ဘာသာ ၀င်လိုက်ပြီလားလို့ မေးကြည့်ဖူးတယ်။ သူက ရေနစ်ခံတာ ဘာခက်လို့လဲ အဲဒါလုပ်မှ လက်ထပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ အလုပ်ဖြစ်ရုံ ရေနစ်ခံလိုက်ပေမဲ့ ငါဘုရားပုံမှန်ရှိခိုးနေတာပဲလို့ ပြန်ဖြေတယ်။ တကယ်လည်း သူတကယ် ယုံကြည်တာက ဗုဒ္ဓဘာသာပဲ ဖြစ်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်ရင်လည်း ဘုရားရှိခိုး အဖွဲ့အစည်းမှာ အလှူလုပ်ရင်လည်း ရေစက်ခွက် ကိုင်နေသူပါ။ ဒီတော့ အခုလည်း တကယ်ယုံကြည်တာ မဟုတ်ဘဲ ဒီလိုမစစ်မှန်တဲ့ ဘာသာခံယူမှုတွေ ဖြစ်လာအောင် တွန်းအားပေးသလို ဖြစ်နေတော့ ဒီဥပဒေကြောင့် မဟုတ်ကို အဟုတ်ဖြစ်အောင် အမှန်တရားနဲ့ ကင်းကွာအောင် တမင်ဖန်တီးရာ ရောက်နေပါတယ်။
(၄) ထို့အပြင် လက်ထပ်မည့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီး၏ မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ၏ စာဖြင့် တရားဝင် ခွင့်ပြုချက်ကို လက်ခံရယူရမည်။
ဒီအချက်ကို ကြည့်ရင် လက်ထပ်ပေါင်းသင်းမည့်သူ အမျိုးသမီးရဲ့ ဆန္ဒ၊ အသိဥာဏ်နှင့် ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ကို လုံးဝ လစ်လျှရှုပြီး မိဘ အုပ်ထိန်းသူဆန္ဒကိုပဲ ထည့်တွက်ထားတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးတွေကို လူသားတဦးရယ်လို့တောင် သတ်မှတ်ပုံမရတာကို တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ လူမှုဘ၀တိုးတက်ရေးနဲ့ မိသားစု စားဝတ်နေရေး ဖူလှုံမှုကို မဖန်တီးပေးနိုင်ဘဲနဲ့ ဒီလိုဥပဒေမျိုး ချမှတ်ရင်တော့ မိန်းကလေးတွေဟာ မိမိချစ်ခင်နှစ်သက်သူနဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခွင့် ဘယ်တော့မှ ကြုံလာစရာ မရှိတော့ဘဲ ငွေမက်တဲ့မိဘတွေ ဒါမှမဟုတ် ဆင်းရဲမွဲတေလှတဲ့ မိဘတွေရဲ့ သမီးဖြစ်ရင် မိဘဆီက ငွေနဲ့ပေါက်ပြီး ငွေဝယ်ကျွန်အဖြစ် အ၀ယ်ခံရတဲ့ဘ၀ကို ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲ ပြန်ရောက်သွားအောင် တွန်းပို့ပေးနေတာနဲ့ အတူတူပဲ။ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူတိုင်းဟာ မိမိအိမ်ထောင်ဘက်ကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာတွေက မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအတွက် အိပ်မက်တောင် မက်ခွင့် မရှိတဲ့ အခြေအနေ ပြန်ရောက်သွားတယ်။
(၆) အထက်ပါ သတ်မှတ်ချက်များကို မလိုက်နာဘဲ မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အမျိုးသမီးသမီးကို လက်ထပ်ခြင်း၊ ပေါင်းသင်းခြင်း ပြုပါက ထိုသူကို ထောင်ဒဏ် (၁၀) နှစ် ကျခံရန် ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ရမည့်အပြင် ထိုသူပိုင်ဆိုင်သည့် ပစ္စည်းအားလုံးကို သိမ်းယူ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအမျိုးသမီးအား လွဲပြောင်းပေးအပ်ရမည်။
(၇) ထို့အပြင် ထိုသို့ကျူးလွန်သည့် ပုဂ္ကိုလ်အပေါ် ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၉၃ အပြင် သက်ဆိုင်ရာပုဒ်မတို့ဖြင့်သာ သီးခြား အရေးယူ အပြစ်ပေးအရေးယူရမည်။
ဒီအချက်တွေက အတင်းဓမ္မပြုကျင့်ပြီး မယားအဖြစ် အသိမ်းသွင်းခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ထောင် ၁၀ နှစ်မကလို့ အနှစ်တရာ သတ်မှတ်လည်း ဘာမှပြောစရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ နှစ်ဦးသဘောတူ ချစ်ခင်နှစ်သက်လို့ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့ တခြားအချက်တွေထက်စာရင် ပိုတောင်ဆိုးသွားသေးတယ်။ လူသားတွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ခံစားမှု၊ သူသားဆန်မှုကို ထည့်တွက်စဉ်းစားမှု လုံးဝ မရှိရလောက်အောင်ကို ရေးတဲ့သူတွေဟာ Critical thinking နဲ့ Common Sense ကင်းမဲ့နေပြီလား၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာ ရှိသင့်ရှိအပ်တဲ့ အကြင်နာတရားနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားဆိုတာ မရှိတော့ဘူးလား။ မိမိက ချစ်နှစ်သက်လို့ မိဘတွေရဲ့ ဆန္ဒကိုတောင် လွန်ဆန်ပြီး မိဘသဘောမတူဘဲ ဘာသာမတူသူနောက်ကို ခိုးရာလိုက်သွားမိတဲ့ အမျိုးသမီးတဦးဟာ ချစ်စခင်စ ကြင်နာစမှာ ခင်ပွန်းသည်ကို သူ့ရင်ခွင်ထဲက ဆွဲထုတ်သွားပြီး ထောင်သွင်း အကျဉ်းချထားတဲ့အချိန်မှာ အတင်းအဓမ္မသိမ်းပိုက် ခံထားရတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ ရွှေဘုံပေါ်မှာစံစားပြီး ပျော်နေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မထင်ပါ။ အဲလို ထင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ထင်သလောက်မလွယ်ဘူး ဆိုတာနဲ့ သမီးရင်ကွဲနာကျပြီး ခံစားနေတာကို ကြည့်ပြီး မိဘဖြစ်သူကတွေကလည်း ပျော်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ခန့်မှန်းကြည့်စေချင်ပါတယ်၊ ဒီလိုလုပ်တာဟာ ဓမ္မမဟုတ်ဘူး အဓမ္မဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ကိုက်ညီနေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ လုံးဝဆန့်ကျင်တဲ့ အကျည်းတန်ဘာသာ အထင်ခံရအောင် လုပ်ရာရောက်တယ်လို့လည်း ထောက်ပြချင်ပါတယ်။
(၈) ဤအက်ဥပဒေအရ ၁၉၅၄ ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးများနှင့် အထူးထိမ်းမြားမှုနှင့် အမွေဆက်ခံမှုဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေကို မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးထမ်းဥပဒေအသစ် ရေးဆွဲပြဌာန်း ပြီးသည်အထိ ရပ်ဆိုင်းထားရမည်။
ရှိပြီးသား ၁၉၅၄ ခှုစ် မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေက ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လည်း ဆန့်ကျင်တာမရှိ အမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်း အကာအကွယ်ပေးထားတာ ရှိပါလျှက်နဲ့ ဒါကိုရပ်ဆိုင်းပြီး အခုလို ဘုရားဟော တရားဓမ္မနဲ့လည်း မကိုက်ညီ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့လည်း မကိုက်ညီတဲ့ ဥပဒေနဲ့ အစားထိုးမယ်ဆိုတာဟာ လုံးဝသဘာဝမကျတဲ့ အချက်ဖြစ်တယ်။ တခုတော့ ရှိတယ် လက်ရှိမြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေမှာ အမျိုးသားတဦးဟာ ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်နိုင်ရင် မိန်းမတယောက်ထက် ပိုယူခွင့်ပေးထားတော့ အမျိုးသားတွေဟာ လွတ်လပ်စွာ အငယ်အနှောင်းထားပြီး အိမ်ထောင်ရေး ဖေါက်ပြန်မှုတွေနဲ့ မိသားစုဘ၀ ပြိုကွဲမှုတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ မယားပြိုင်စနစ်ကို ဖျက်ပြီး တလင်တမယားစနစ်ကို အစားထိုးပြီး ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် လက်ရှိမြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေဟာ တရားမျှတပြီး အတော်အသင့် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဥပဒေတခု ဖြစ်လာမှာမို့ ဘာဥပဒေအသစ်မှ ထပ်လုပ်စရာလိုဘဲ ရှိပြီးသားကို ပိုကောင်းအောင် ပြုပြင်ပြီး လက်တွေ့ကျကျ ကျင့်သုံးဖို့ပဲ လိုတယ်လို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့် ပြောရရင်တော့ ဒီဥပဒေကို ရေးဆွဲသူတွေရဲ့ စေတနာကို နားလည်အသိအမှတ်ပြုပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ရေးဆွဲထားတဲ့ ဒီမျိုးစောင့်ဥပဒေဟာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘ၀ကို ကာကွယ်ပေးထားတာ ဘာမှမရှိဘဲ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပြည့်စုံလှတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရတွေကို အကျည်းတန်အောင် ဘာသာခြားတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာကို သေးသိမ်ပြီး အမြင်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ ဘာသာတခုလို့ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် လုပ်ရာရောက်နေပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ အမျိုးသမီးတွေ ကောင်းကျိုးအတွက် တကယ်ယုံကြည်ပြီး ရေးဆွဲထားတယ်ဆိုရင်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပဲ ရေးဆွဲပြီး ကျန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက် မပါတော့ လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်းစုံ နေထိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒါဟာ တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ဥပဒေလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ လူမျိုးတမျိုးတည်း ဘာသာတခုတည်း ရှိတာမဟုတ်၊ လူမျိုးတိုင်း ဘာသာတိုင်းဟာ မိမိလူမျိုး မိမိဘာသာကို တိုးတက်ချင်စိတ်ရှိကြပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံဟာ ဘာသာပေါင်းစုံ လူမျိုးပေါင်းစုံ စုပေါင်းနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လို့ ဥပဒေဆိုတာ လူမျိုးတမျိုး ဘာသာတမျိုးတည်းအတွက် ကွက်ကွက်လေး မျက်နှာလိုက်ရေးဆွဲလို့ မဖြစ်၊ လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ ကိုက်ညီပြီး သဟဇာတ ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေကို ဘာသာခြားတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုမှ ကင်းဝေးပြီး အမျိုးဘာသာ သာသနာကို တကယ်ထိန်းသိမ်းစေချင်တယ်ဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပဲ ကန့်သတ်လို့ မရနိုင်ဘူး။ လက်ရှိအမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘ၀ကို တိုးတက်မြင့်မားအောင် လုပ်ပေးပြီး မိမိအခွင့်အရေးကို မိမိနားလည်အောင် လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ အရွယ်ရောက်လာမည့်သူတွေအတွက် ကလေးတွေကို မိမိကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရဲ့ တန်ဖိုးကို ကလေးတွေသိအောင် ငယ်စဉ်ကတေည်းက သင်ကြားပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အခုတော့ ကျွန်မတို့ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဘုရားရှိခိုးတွေကို ကြက်တူရွေးစာရွတ်သလိုပဲ တတွတ်တွတ်ရွတ်ရုံသာ ရွတ်လာပြီး အနှစ်သာရဘာမှန်းမသိရုံတင်မက တို့ဗမာသာကီမျိုးဆိုပြီး ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်လူမျိုးမှ မြတ်တယ် တခြားဘယ်သူနဲ့မှ မတူသလိုလို သွေးနားထင်ရောက် ဂုဏ်မောက်အောင်လည်း သင်ကြားပေးခံလာရတော့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာရဲ့ အနှစ်သာနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး စိတ်ကြီးဝင်စေပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာ အမျှော်အမြင်ကြီးမားတဲ့ မိဘတွေနဲ့ ကြီးလာတဲ့ ကလေးတွေကလွဲရင် ကြီးလာမှ စိတ်ဝင်စားလို့ ကိုယ့်ဖါသာကိုယ် လေ့လာတဲ့သူတွေကပဲ မိမိကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရဲ့ တန်ဖိုးကို သိရှိနားလည်ခွင့်ရပြီး စိတ်မ၀င်စားတဲ့သူကတော့ ဘာသာမဲ့ဖြစ်သွားသူနဲ့ မဖြစ်တဲ့သူကလည်း မိမိဘာသာရဲ့ တန်ဖိုးနဲ့ အနှစ်သာရကို နားမလည်ဘဲ မိရိုးဖလာအဖြစ်နဲ့ပဲ ရှိနေပြီး ဒီလိုနားမလည်ခြင်းက ဘာသာခြားနဲ့ လက်ထပ်ရင် ဘာသာကူးပြောင်းဖို့ လွယ်ကူစေတဲ့အကြောင်းရင်း ဖြစ်တယ်။
တကယ်တော့ ဒီလို ဥပဒေတွေ ထုတ်မည့်အစား ဗုဒ္ဓဘာသာ ကလေးတွေကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အနှစ်သာရနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အဆုံးအမအတိုင်း နူးညံ့သိမ်မွေ့အောင် သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့ အစီစဉ်တွေကို ရေးဆွဲသင့်ပါတယ်။ ဘာသာရေး အနှစ်သာရကို သင်ကြားပေးခံရတဲ့ ကလေးတွေကြီးလာရင် မိမိကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာမှာ အခြေခိုင်ပြီးသား ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးသင့်တယ်။ လက်ရှိ အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလည်း ဆင်းရဲကြပ်တည်းမှုနဲ့ အသိပညာနှိမ့်ကျနေမှု နွံထဲက ရုန်းထွက်နိုင်တဲ့ အစီစဉ်တွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်ရင် အဲဒီအကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ဘာသာခြားရဲ့ သိမ်းပိုက်ခံရစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ အကယ်၍ ခံရသည့်တိုင် ရှိပြီးသား မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်း ဥပဒေကို လက်တွေ့ကျကျ ကျင့်သုံးရင် အမျိုးသမီးတွေအတွက် အကာအကွယ် ရှိပြီးသား ဖြစ်တယ်။ ဒီလို မိမ်ိဘက်က သက်လုံကောင်းအောင် လုပ်ထားရင် အခုလို အမျိုးပျေက်မှာကို တွေးကြောက်ပြီး ဘုရားဟောနဲ့ရော လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပါ မကိုက်ညီတဲ့အပြင် ရှိပြီးသား ဥပဒေထက်လည်း ပို နှိမ့်ကျတဲ့ ဥပဒေမျိုး ပြဌာန်းနေဖို့ မလိုအပ်တော့ဘူး ဆိုတာ အကြံပြုတင်ပြချင်ပါတယ်။
Credit to : Nge Naing
Posted: 23 Jun 2013 04:37 AM PDT
ဘာသာ သာသနာနဲ့ လူမျိုးကို စောင့်ရှောက်ဖို့က လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတာထက် ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုသူများဟာ အဝေးမှုန်တွေဖြစ်ပါတယ်… အဲ့ဒီအဝေးမှာ ဘာတွေရှိသလဲဆိုတော့ ထင်သာမြင်သာတာ တစ်ခု ထုတ်ပြောရရင်
အမေရိကန် ရဲ့ sanctions တွေရှိပါတယ်… အဲ့ဒါတွေ အမြန်ဆုံး ပယ်ဖျက်ပေးမလား ဆက်ထားမလားဆိုတာ မြန်မာပြည် အစိုးရရဲ့ အသုံးကျမူအပေါ် ယုံကြည်ရမူ အပေါ် မူတည်ပါတယ် အသုံးကျမူဆိုတာ-
ပြောထားတဲ့ ကတိအတိုင်း နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်မူ ( စောင့်ကြည့်နေရဆဲ )
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မူတွေ မရှိမူ ( မရှိဘူးပြောရင် မရှိဘူးပဲ လောလောဆယ်)
နိုင်ငံသားတိုင်းအတွက် နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး ( ဘာသာမရွေး) အပြည့်အ၀ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်မူ ( အောင်မှတ်တောင်မရ)
အဲ့ဒါလေးတွေ ပြည့်စုံမှ sanctions ဆိုတာ ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ အခြေအနေကောင်းမှာပါ
sanctions တွေ ပယ်ဖျက်တော့ ဘာထူးလာမှာလည်းလို့ မေးရင်
အမျိုးကောင်းသမီးလေးတွေ ဘ၀ကနေ အမျိုးမကောင်းသမီး ဘ၀ကို မရောက်ချင်ပဲ ရောက်ရရှာတဲ့ မိန်းမပျိုကလေးတွေအတွက် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ရှာဖွေစားသောက်နိုင်ဖို့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကလေးတွေ အမြောက်အများ ဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် လူတွေရဲ့ဝင်ငွေလမ်း ဖြောင့်လာမှ အလှူအတန်း ရက်ရက်ရောရော ပေးလှူနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပြီး သာသနာဟာ စိတ်ချမ်းသာစရာ ကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ထွန်းကားစည်ပင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် အိုကြီးအိုမ အရွယ်ထိ ပင်ပန်းဆင်းရဲ အလုပ်လုပ်နေကြရတဲ့ အဘိုးအို အဘွားအိုတွေ လျော့ပါးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် အရွယ်နဲ့မလိုက် အလုပ်လုပ်နေကြရတဲ့ ကလေးငယ်တွေ လျော့ပါးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဆေးဖို့ မတတ်နိုင်လို့ သေသင့်တဲ့ ရောဂါ မဟုတ်ပဲ သေခဲ့ကြရတဲ့ လူတွေ နည်းပါးပြီး အခြေခံ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မူတွေ ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် etc ပေါ့လေ…. ပြောနေမယ်ဆိုမပြီးပါ..
အဲ့ဒါကြောင့် အမျိုးဘာသာကို ကာကွယ်ဖို့က လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာထက် ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ အဝေးမှုန် အိုင်ဒီယာမျိုး ကိုင်စွဲမထားကြပါနဲ့….
အမျိုးဘာသာ ကာကွယ်ဆို့ဆိုရင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်သင့် ဖောက်ရမယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်ရောက်စေမယ့် ပုံစံမျိုးကို မဖန်တီးပါနဲ့…
လူ့အခွင့်အရေးအပြည့်အ၀ ရှိသင့်တယ်လို့ အော်နေတဲ့လူတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲမှာလည်း ခင်များတို့ထက် မနည်းတဲ့ အမျိုးဘာသာကို ချစ်ခင်စိတ် မြတ်နိုးစိတ်ရှိကြပါတယ်..
မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတိုင်း အဝေးမှုန်ခြင်း ကင်းဝေးကြပါစေ…
Posted: 23 Jun 2013 06:42 AM PDT
"Namun kami pasukan peguam membantah dengan alasan Husam ditahan di bawah Seksyen4Akta Hasutan 1948, di mana akta itu mensyarat sama ada perkataan yang diucap termasuk dalam kategori menghasut atau tidak.
"Lagi pun polis sudah mendapat rakaman ucapan dan boleh buat keputusan sama ada menghasut atau tidak. Kalau menghasut polis boleh buat pertuduhan di mahkamah dan jika tidak hendaklah bebaskan segera," katanya kepada pemberita di luar IPD.
"Tidak perlu menahan lebih lama. Mahkamah arah bebas esok sebelum jam 12 malam," ujarnya.
"Sepatutnya didengarkan di mahkamah majistret. Kalau polis hendak sambung reman mereka kena buat permohonan lagi kepada mahkamah.
"Jadi siasatan perlu diselesaikan hari ini dan esok. Malam ini Husam akan bermalam di lokap," katanya.Hisham yang juga Pengerusi Lajnah Guaman dan Hak Asasi Manusia PAS Kelantan turut melahirkan rasa kesal terhadap polis Kelantan kerana tidak membenarkan Menteri Besar, Ustaz Datuk Ahmad Yakob datang melawat Husam yang tiba sekitar jam 12.10 tengah hari.
"Sepatutnya polis benarkan MB datang menziarahi Husam di lokap IPD. Kami peguam meluah rasa kesal kerna polis enggan membenarkan MB atau mana-mana Exco menziarahi Husam di lokap, tanpa sebarang alasan.
"Kami amat kesali. Sepatutnya tidak dilakukan polis. Ini menggambarkan mereka tidak menghormati kerajaan dan rakyat negeri Kelantan.
"Saya berharap polis segera mengubah keputusan itu dan membenarkan MB hadir menziarahi Husam. Negeri ini ada ketua dan sepatutnya MB dibenarkan menziarahi mana-mana Adun yang ditahan," ujarnya.
"Mengapakah Husam tidak ditahan di Kota Baharu, jika PDRM mendakwa bahawa laporan polis terhadap beliau di bawah seksyen 4(1) Akta Hasutan telah dibuat di Kota Bharu?" tanya beliau dalam satu kenyataan.
"Juham menegaskan bahawa tindakan PDRM dalam perkara ini adalah berniat jahat (mala fide) dimana telah menafikan hak Husam berjumpa peguamnya.
"Tindakan ini diselar oleh pihak Juham dan ini menjustifikasikan pelanggaran pihak PDRM kepada peruntukkan undang-undang di bawah Kanun Prosedur Jenayah," tegasnya.
Beliau menambah, tindakan PDRM dilihat sebagai tindakan yang 'bacul' dan bersifat menyusahkan Husam dan pihak peguam.
"Mengapa dalam kes Husam ini, tindakan sebaliknya dilakukan PDRM dan ini memperlihatkan PDRM sebagai tidak professioanl dan membelakangi undang-undang sedia ada," ujarnya lagi.
"Pihak Juham tidak menolak kemungkinan akan mengambil tindakan Semakan Kehakiman (Judicial Review) berhubung perkara ini," tegasnya lagi.
Posted: 23 Jun 2013 02:20 AM PDT
Posted: 23 Jun 2013 12:45 AM PDT
Man 'whacks' Najib
KUALA LUMPUR: While politicians delivered fiery speeches at Padang Merbok, one elderly man decided to show his frustration by beating Prime Minister Najib Tun Razak's portrait withaslipper.
"Najib knows how to make laws but he doesn't understand on how to follow them. This is why he deserves it," said M Krishnan,55 before whacking Najib's portrait repeatedly.
He also drank some water, before spitting it out on Najib's portrait.
"So I stopped paying rent after three months. Now I owe DBKL about RM3,000 but I don't care," said Krishnan.
"If the police want to take action against me, go ahead. I'm not afraid," he said. - FMT
Posted: 22 Jun 2013 09:52 PM PDT
Posted: 22 Jun 2013 09:45 PM PDT
A Bukit Aman officer called me at midnight:
"Bro. Our HQ is just next to Padang Merbok. We saw everything that took place during the 505 rally... very clear from the upper floors. We know what actually happened when some protesters attacked the City Hall (DBKL) personnel. They didn't heed the police advice not to confront those who set up tents there. We told them to just let it end and the tents could be removed later on... but that's how it happened..."
I do not support the rally and the opposition, and will never do.
However,aPM's aide was fast to ask some bloggers to use the video footage showing the 'fracas' in their blogs and news portal. It also goes viral on You-Tube.
This PM's officer was too excited, I guess. He was looking forahigher position at the PMO since he already got what he wanted - money and some power.
Without counter-checking the event that led to the fracas, he saw the opportunity. He was expecting the boss to recognise his speed and efficiency in managing the PMO new media team.
I believe it will backfire soon... and I also believe PM has every reason to fire him before he burns down the whole house!
Posted: 22 Jun 2013 09:29 PM PDT
Posted: 22 Jun 2013 08:38 PM PDT
Posted: 22 Jun 2013 09:28 PM PDT
Posted: 22 Jun 2013 05:51 PM PDT
A 40-YEAR-OLD religious teacher has appeared in court charged with indecently assaultingagirl under the age of 13. Suleman Maknojioa faces five allegations that he intentionally sexually touched the girl, who was receiving private tuition from him. Blackburn magistrates were told the assaults were alleged to have taken place in front of two other children, who were also being taught by Maknojioa. Catherine Allan, prosecuting, said that on the day he was arrested, Maknojioa,ahighly-respected Hafiz, was due to teach 30 children ataBlackburn mosque.
Maknojioa, of Billinge Street, Blackburn, pleaded not guilty to all five charges, and was directed to stand trial at Preston Crown Court, where he is due to appear on July 10. He was remanded on bail with the conditions that he does not have any unsupervised contact with, or teach any child under the age of 16.
Maknojioa was also told to surrender his passport, and told he must not contact witnesses. He was also ordered to report to the Boulevard police station twiceaweek. The Lancashire Telegraph
Posted: 22 Jun 2013 05:48 PM PDT
According to sources, the four agents do not greet women they encounter during working hours. They might even completely ignore them totally, writes 'Het laatste Nieuws' .
A police spokesman of the Brussels police confirms the problem. "We know the problem and we plan to haveameeting with the parties involved."
Posted: 22 Jun 2013 05:47 PM PDT
When her son left Calgary last November, his mother thought the 21-year-old Muslim convert had gone to study atauniversity in Egypt. Then two Canadian Security Intelligence Service officers came to her front door. "We don't think he's in Egypt," they told her. They showed her photos of his suspected associates. They said they'd been monitoring her son for some time and had reason to believe he might be involved with an extremist group. A few days later, the CSIS officers came to her workplace and said they'd checked his travel history and confirmed he was not in Egypt. He'd flown instead to Istanbul and, from there, had probably crossed into Syria.
"He's definitely with some kind of jihadist group," the mother told the National Post on the condition she would not be publicly identified. "They call themselves the Muslim Brotherhood out here. And he was recruited fromamosque." As the war in Syria has dragged on, with almost daily reports of atrocities, recruits from across Canada have allegedly been making their way to the region to join the fight, sometimes alongside extremists loyal to al-Qaeda.
A Canadian man was reportedly one of several rebels killed by pro-Syrian forces on May 31, along with British and American fighters. Another Canadian,aMuslim convert who called himself Abu Muslim, appeared inatelevision documentary broadcast last week by Britain's Channel 4. It showed the Canadian raising an assault rifle in Allepo with the armed group Katiba al-Muhajireen, which is composed almost entirely of foreign fighters. Asked about his parents in Canada, he said, "On the one hand, they are happy I'm taking my own path, doing my own thing and helping people. At the same time, they don't understand entirely why I'm here."
The government isn't sure how many Canadians are fighting in Syria. "It's very difficult for us, actually, to tell who in fact is over there," Vic Toews, the Minister of Public Safety, said in an interview last week.
He said Canada's lack of exit controls meant authorities could not track those who had traveled to the region. But he said community members had come forward to say "this individual has disappeared and we don't believe it's simply because he's gone to visit relatives in Europe." Read the whole article here at The National Post
Surabaya/Jakarta. The bedraggled group of 162 men, women and children had since August last year been forced to live in squalor inasports center that was meant to be their temporary refuge, afteramob drove them out of their home village in Sampang district on Madura Island.
If they thought they had scraped the bottom of the barrel, they were proven wrong on Thursday when the authorities, also backed byamob, once again ordered them relocated, this time toamarket in Sidoarjo, on the East Java mainland.
The offense that had condemned them into exile twice in less thanayear was the simple fact that they were Shiites amongaconservative Sunni majority. The plight of the Sampang Shiites, as the world has come to know them, enteredadark new chapter this week with the latest forced eviction, which an advocate for the group says was instigated by Sunni clerics and district officials who wanted the Shiites out of Madura. Read the whole article at The Jakarta Globe
Posted: 22 Jun 2013 05:42 PM PDT
PESHAWAR: A young actress suffered burn injuries in an acid attack in northwest Pakistan on Saturday, her relatives and police said. The 18-year-old, known as Bushra and popular in the northwest for her film, television and theatre appearances, was attacked while asleep at her home in the town of Nowshera, 148 kilometres (92 miles) northwest of Islamabad.
"A man climbed the wall of our house in the early hours, threw acid on my sister and fled," Bushra's brother, Pervez Khan said. A local police official, Sultan Khan also confirmed the incident. The teen was immediately taken to Lady Reading Hospital in Peshawar where Dr Suhail Ahmad said she had suffered 33 per cent burn injuries, on her face and shoulder, but was inastable condition. Her brother Pervez Khan has lodgedacomplaint againstalocal TV drama producer, Shaukat Khan, over the incident saying that the producer was unhappy over Bushra's refusal to marry him.
Last year, popular Pakistani singer Ghazala Javed, 24, was shot dead by gunmen as she leftabeauty salon in Peshawar overadispute with her ex-husband. Acid attacks are common in Pakistan with scores of such assaults taking place each year. The plight of acid attack victims and survivors became the focus ofa40-minute Oscar-winning documentary Saving Face byaPakistani woman Sharmeen Obaid-Chinoy in 2012. India Times
Posted: 22 Jun 2013 05:38 PM PDT
Militancy and attacks targeting education institutions in the north affect students' participation in contests, says Promisador, organiser of Cowbell National Secondary Schools Mathematics Competition. The firm said the competition had "struggled" the last couple of years because of the activities of groups like Boko Haram hampering education in the region.
"Level of participation in the north reduced considerably," said Promisador chief executive officer, Keith Richards ataprize presentation for 20 winning students who sat for the 2013 contests. Girls were mostly affected, he said, noting no female student from the region made the list last year, though the number of students entering the contest exceeded 30,000 this year, up from 15,000 in 2011. Richards appealed to the Nigerian government to "act fast and save the situation, as it is destroying the future of many young Nigerians."
A public school, Iganmode Grammar, in Ogun state beat 18 others for consistently outstanding performance after it placed third forarecord third consecutive year.
A win in the senior school category by Nasir Akindele, first taken by his brother in 2011, gave Iganmode the Benson Oweka Memorial Prize--five desktops and printers, along with educational materials for all Iganmode students. Akindele got N300,000 prize money andalaptop in the senior category, while Iyoha Omonzokpia got N250,000 after for first position in junior secondary category.
Akindele and second-place winner Lois Adegbohungbe, whose school Reality High produced two national winners this year, represent Nigeria at the Pan African Mathematics Olympiad, and start off training at the National Mathematics Centre, NMC. NMC director-general, Adewola Solarin was running "strategies to make mathematics look as ordinary as any other subject", considering popular student phobia toward the subject. They includeamaths clinic and an Operation Kick Out Maths Phobia,atwo-week intensive maths boot camp for secondary school students. All Africa